40 cunnooyinka macmacaanka leh Thermomix - Kala soo bax buugga cuntada
40 cuntooyinka macmacaanka leh Thermomix
Buuggan cusub ee buug-karinta casriga ah waxaad ka heli doontaa 40 suxuun cajiin oo heer sare ah oo leh keega, muufada iyo bundtcakes, iyo sidoo kale crostatas, jajabka, buskudka iyo rootiga la dubo iyo xulasho badan oo keeg ah iyo noocyo kala duwan. Dabcanna ma aysan seegi karin jowharadaha macmacaanka: truffles. Macmacaan loogu talagalay qof walba, Maaddaama in badan oo ka mid ah cuntooyinka ay ku habboon yihiin dadka dulqaad la'aanta leh ama kuwa raacaya cuntada khudradda.
Kani waa buug cunto kariye ah oo qaab digital ah waad hubin kartaa markasta oo aad rabto kombiyuutarkaaga, kiniinigaaga, aaladdaada moobaylka ama ku daabac warqad. Had iyo jeer waad heli doontaa gacanta xitaa haddii aadan u dhoweyn Thermomix-kaaga.
Iibso EBOOK - € 9,99
40 cunnooyinka macmacaanka macaan waligood laguma dhajin baloogga kahor
Tani waa cunnooyinka ugu macaan Thermorecetas, oo loogu talagalay jacaylkeena oo dhan taageerayaasheena daacadda ah ee maalin walba nala socda oo naga caawiya sidii aan u suurtogelin lahayn mashruucan. Waxaan rajeyneynaa inaad ubogtay sida ugu badan ee aan ugu raaxeysanay diyaarinteeda.
Cunto noocee ah ayaad heli doontaa?
Waxaad kula yaabi doontaa asxaabtaada iyo qoyskaaga macmacaan macaan sida:
Buluug Buttermilk Waffles
Laba koob oo karamell ah
Kareemka iyo Shukulaatada Shukulaatada ah
Xilliga xagaaga oo ku burbura tufaax, fersken iyo miro madow
Millefeuille kareem caano leh
Mousse farmaajo leh mango compote
Pionono kafee iyo kareem dublamaasiyadeed
Kukiyada Shukulaatada Shukulaatada ah
Digaag yogurt Greek
Gawaarida shukulaatada cad oo leh buluug iyo liin
Bisinka panna cotta
Shaki? Isku day cunto karinta bilaash ah
Haddii aad weli shaki ka qabtid waxa aad ka heli doonto buugga cuntada, waxaan kuu soo bandhigeynaa mid ka mid ah cuntooyinka gaarka ah ee eBook: macaan muufka sinjibiil tangerine. Soo Degso Halkan.